Roku wuxuu bilaabi doonaa codsi loogu talagalay Apple Watch | Wararka IPhone
Toddobaadyadii la soo dhaafey, waxaan aragnay sida inta badan sanaadiiqda set-top-ka iyo telefishannada hadda looga heli karo suuqa, Roku, Fire Stick, Samsung iyo Sony telefishanka. waxay hayaan barnaamijka Apple TV ee ay iyagu hayaan, codsi u oggolaanaya inay marin u helaan adeegga fiidiyowga qulqulaya iyo buugga laga heli karo iTunes.
Qalabka Roku wuxuu horey uhelay arjiga oo la heli karo mudo bil ah, waa codsi sidoo kale siinaya helitaanka HBO, Showtime iyo Apple TV Channles, laakiin ma noqon doonto kaliya hal abuurnimada ay soo saaruhu qorsheynayaan inuu hirgeliyo, tan iyo dhowaan ayaa bilaabi doona codsi loogu talagalay Apple Watch.
Caqli ahaan, codsigani nooma oggolaan doono inaan ku raaxeysano qulqulka adeegyada fiidiyoowga ee curcurka, laakiin wuxuu diiradda saarayaa noqo kontoroolka fog ee adeegga. Codsigan ayaa noo oggolaan doona inaan si deg deg ah u marinno kanaallada kala duwan ee Roku na siiyo, kanaalada loo soo bandhigo iyadoo loo raacayo siday u kala horreeyaan oo aan ku dari jirnay, kii ugu dambeeyayna waa kii ugu horreeyay ee la helo.
Ku raadi cod ahaan waa mid kale oo ka mid ah shaqooyinka uu codsigan bixin doono. Adoo gujinaya astaanta qaab makarafoon, waxaan awoodi doonnaa inaan u sheegno Apple Watch "Start Hulu", "Comedies Search", "U Bedelo HDMI 1" ... Howshan lagama heli karo dhammaan qalabka Roku iyo telefishanka .
Shaqada ugu dambeysa ee codsigan uu na siin doono waa suurtagalnimada hel qalabka fog. Marka la fulinayo shaqadan, kontoroolka ayaa sameyn doona dhawaaq noo oggolaanaya inaan ka dhex helno barkimooyinka fadhiga, halkaasoo kontaroolada badanaa lagu qariyo. Habkaani, sida kan kor ku xusan, waxaa laga heli karaa xulashada Roku TVs iyo qalabka.
Roku waxaa laga heli karaa Mareykanka, Boqortooyada Ingiriiska, Faransiiska, Kanada, iyo inta badan wadamada Latin Amerika. Marka la gaaro 2020, shirkaddu waxay rabtaa ku fidiso dalalka kale ee Yurub halka aan wali laga helin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Roku wuxuu bilaabi doonaa barnaamij loogu talagalay Apple Watch
Kuwani waa 6da kulan ee cusub ee laga heli karo Apple Arcade